တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: မျက်မှောက်ခေတ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ (၉၅)
ထို့ကြောင့် ခေတ်ကာလရေစီးကြောင်းတွေ မည်သို့ပင် စီးဆင်းနေပါသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အတွက်တော့ မပြောင်းလွဲသော အမြဲတမ်းတောက်ပနေသော လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော် လောက်က မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော စည်းကမ်း နည်းလမ်း ပညာတို့သည် ဒီကနေ့ထိ ခေတ်မှီတိုးတက် နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် မည်သို့ပင် တိုးတက်စည်းကား သိုက်မြိုက်သည်ဟု ဆိုပါစေအုန်း စည်းကမ်း နည်းလမ်း ပညာတို့ မတိုးတက်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး တိုးတက်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတော်မူသော တရားများတွင် မည်သည်ကား စည်းကမ်း ဝိနယများ၊ မည်သို့ သော တရားတို့သည်ကား နည်းလမ်းပေးသော တရားများ၊ မည်သည့်သောတရားများက ပညာဖြစ်စေ သော တရားများဟု ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။
ထိုသို့သော ဥပမာလို ဥပမာဇောတက ထွန်းပလိုသောကြောင့် ပဋ္ဌာန်း ကုသလ၊ အကုသလ၊ အဗျာ ကတတို့ကို ထပ်၍ လောကဥပမာ ထွန်းလင်းပြလိုသည်။ ကုသိုလ်ပစ္စည်းတရားသည် ကုသိုလ်ပစ္စယုပ္ပန်များ ဖြစ်သော တရားများကို အကျိုးပြုကြသည်။ (Wholesome state can be associated with good deed.) ထို့အတူ တစ်စုံတယောက်သည် သူတပါးက မတားမြစ်သော၊ ဥပဒေလွတ်ကင်းသော၊ အများက လက်ခံ ထားသော၊ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လည်းဖြစ်သော မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ဆောင်ထားသော ကောင်း သော လုပ်ငန်းကြီးကို ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် နောက်ဆုံး မိမိကိုယ်တိုင် ပိုင်ဆိုင်ရရှိ လိုက်သော ထိုစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရေး စသည်တို့ကို အောင်မြင်မှုနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည် ကုသိုလ်တရားတို့ကို ထွန်းပခြင်း ဥပမာပင် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်တွင်လည်း အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော၊ (Unwholesome can be associated with bad deed.) ၄င်းအကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ် ပစ္စယုပ္ပန်တရားကို ကျေးဇူးပြု၍ သဟဇာတဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင် အကုသိုလ်ဖြစ်သော အကြောင်းတရားတွေကို သူတပါးက တားမြစ်သော၊ ဥပဒေမလွတ်ကင်းသော၊ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် မဟုတ်သော အကုသိုလ်တရားတို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အကုသိုလ်တရားဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်က နောက်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာ ရရှိလိုက်သည်။ ထိုတရားသည် အကုသိုလ်တရားဖြင့် လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စသည်တို့၌ သဟဇာတ ဖြစ်တာလည်းရှိကြသည်။
ထို့အပြင် တရားများသည်ကား အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ သဟဇာတ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ (Indeterminate consciousness can be associated with indeterminate consciousness.) အဗျာကတတရားသည် အဗျာတကပစ္စယုပ္ပန်တရားများကို ကျေးဇူးဖြစ်၍ သဟဇာတ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအဗျာတက တရားတို့သည်လည်း ဤနည်းအတူ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စသည်တို့တွင် သဟဇာတ ဖြစ်၍ မိမိတို့ လျှောက်လမ်းသော လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ဖြစ်လာကြသည်။
ထို့အပြင် လောဘ(Greed)ဒေါသ(Hatred)မောဟ၊Ignorance)အလောဘ(Non-greed) အဒေါသ (Non-hatred) အမောဟ(Non-ignorance)ဟုဆိုအပ်သော ဟိတ်တရား ခြောက်ပါးကြောင့်လည်း ဖြစ် ကြသည်။ လောဘကြောင့် မိမိတို့အသိုင်းဝိုင်း (Environment) ပတ်ဝန်းကျင် (Association) လူမှုရေး (Economy) စီးပွားရေး (Education) ပညာရေး စသည်များတွင် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများစွာ ရှိကြသည် ကိုလည်း မိမိတို့နေထိုင်သော လက်တွေ့ဘဝတွင် မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ကြရသည်။ ဒေါသကြောင့် လည်း မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောင်ထားသော (Constitution of the life of environment) ဘဝဝန်းကျငအတွင်းက (Eco) စီးပွားရေး၊ (Association) လူမှုရေး၊ (Education) ပညာရေးစသည်များစွာ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ကြရသည်။ မောဟကြောင့်လည်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းထားသော အသိုင်း အဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး စသည်တို့တွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာ မိမိတို့ ဘဝ ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင် ကြရသည်။ ထိုတရားများသည် အကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့် ကျင်လည်ကျက်စား နေသောကြောင့် ဖြစ်ကြသည်။
အကယ်၍သာ အကုသိုလ်နယ်ပယ် မဟုတ်သော ကုသိုလ်နယ်ပယ်တွင်းက လုပ်ကိုင်ကြမည်ဆို လျှင် အလောဘတရားဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖြူဖြူစင်စင် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း လုပ်ငန်းခွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စသည်များစွာတို့ကို လုပ်ကိုင်လျှင် အောင်မြင်ဖို့ရန် နည်းလမ်းကောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုနည်း အတူ အဒေါသ နှင့် အမောဟတို့ကိုလည်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ကောင်းမွန်စွာ တည် ဆောက်ထားသော ဘဝဝန်းကျင်တွင်းက ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းစသည် ကိစ္စတို့ကို လုပ်စွမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစား၍ မိမိတို့ လိုချင် တောင်းတသော ပန်းတိုင်ဆီသို့ ရောက်အောင် သွားနိုင်သာလျှင် အောင်မြင်သော ဘဝခရီးလမ်းကို ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
ထိုမှတပါး ဘဝသံသာရာကိုလည်း စွဲဆောင်ဖြားယောင်၍ ခေါ်ဆောင်သွားတက်သည်၏ အဖြစ် ကြောင့် သံသာရာရှည်စေသော တရားများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းသံသာရာရှည်ခြင်းများသည်လည်း မိမိ၏ ကံကြမ္မာ အယောင်ဆောင် ဖျားယောင်မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်ကြသည်။ သူတစ်ပါးက ကံကြမ္မာ ဖန်တီးလို့ အယောင်ဆောင် သွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် (The noble truth of Suffering) ဒုက္ခသစ္စာနှင့် (The noble truth of the cause of suffering) သမုဒယသစ္စာတို့သည် (Ignorance) အဝိဇ္ဇာ၊ (Mental formation) သင်္ခါရ၊ (Consciousness) ဝိညာဏ၊ (Mind and matter) နာမရူပ၊ (Six bases) သဠာယတန၊ (Contact) ဖဿ၊ (Feeling) ဝေဒနာ၊ (Attachment) တဏှာ၊ (Clinging) ဥပါဒါန၊ (Survival of life) ဘဝ၊ (Rebirth linking consciousness) ဇာတိ၊ (Old age) ဇရာ၊ (Death) မရဏ၊ (Sorrow) သောက၊ (Lamentation) ပရိဒေဝ၊ (Suffering) ဒုက္ခ၊ (Anger) ဒေါမနဿ၊ (Fire of distress) ဥပါယာသ အစရှိသော အလွှာအသီးသီးတို့ ဖြစ်လာကြသည်။ ၄င်းတရားများကို ဒုက္ခ ဖြစ်ကြောင့်တရားဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သလို သမုဒယရှိ အကြောင်းခံဟု၍ ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
အကယ်၍သာ အဝိဇ္ဇာ ချုပ်ရာ ဝိဇ္ဇာတရားဖြစ်ခဲ့ရင် ထိုတရားများကို လောကုတ္တရာတရားဟု ခေါ်ဆို နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုလောကုတ္တရာတရားများသည်လည်း အပိုင်အခြားအားဖြင့် သူ့နေရာနှင့်သူ ရှိကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ပိုင်းခြား၍ ရှိနေခြင်းသည်လည်း ပုဂ္ဂိုလ် ဝေနေယျတို့ကို စရိုက်အားဖြင့် ကြည့်၍ ဖြစ်ကြရသည်။ တဖန် (The cessation of ignorance) အဝိဇ္ဇာ ချုပ်ရာ၊ (The cessation of mental formation) သင်္ခါရတို့ ချုပ်ရာ၊ (The cessation of consciousness) ဝိညာဏတို့ ချုပ်ရာ၊ (The cessation of mind and matter) နာမရူပတို့ ချုပ်ရာ၊ (ပ) (The cessation of distress) ဥပါယာသတို့ ချုပ်ရာ ဖြစ်သော တရားများသည် နိရောဓသစ္စာဖြစ်၍ မဂ္ဂင်လမ်းစဉ်ဖြစ်သော မဂ္ဂသစ္စာလည်း ဖြစ်ကြ သည်။
ထို့ကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက်က သီအိုရီများသည် မည်သို့ပင် ကောင်းမွန်သည် ဆိုစေအုန်းတော့ နောက်ဆုံး မဏ္ဍိုင်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောဖော်ညွန်ပြ ဆိုဆုံးမသော တရားတော်တွေဆီသို့ တနေ့နေ့ တချိန် ချိန်တွင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အနှစ်သာရရရှိ၍ တွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် (The globalization of modern age) ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ သိပ္ပံပညာရပ်တွေ မည်သို့ပင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေသည်ဟု ဆိုပါစေ အုန်း မြတ်ဗုဒ္ဓဟောဖော်ညွန်ပြ ဆိုဆုံးမသည့် တရားတော်တွေလောက် ခမ်းနားကြီးကျယ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ပါ။ ဒီခေတ် ဒီအခါတွင်းမှာ ခေတ်ကြီးတိုးတက်လွန်းလို့ အိုင်းစတိုင်လ် (Theory) သီအိုရီ၊ နယူးတန် (Theory) သီအိုရီ၊ ကမ္ဘာကြီး လုံးခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီး ပြားခြင်းဆိုသည် အယူအဆတွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင် အသီးသီးက သီအိုရီ တွေ ကိုင်စွဲထားကြသော်လည်း နောက်ဆုံးနိယာမ၏ လွင်ပြင်ရောက်လာသည့်အခါ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောဖော် ညွန်ပြထားသည့် တရားတော်တွေလောက် ကောင်းမွန်သည့် အရာဟူသမျှ မရှိနိုင်ချေ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အရာအားလုံးသည် နေရာလိုက် တန်ဘိုးရှိကြသည်။ နေရာလိုက် တန်ဘိုးကို နေရာလိုက် သုံးတက်ဖို့ လိုအပ်သည်။ နေရာလိုက် မသုံးတက်လျှင် မိမိ သူတစ်ပါး စိတ်သောက ရောက်မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အသုံးချဖို့အတွက် မဟုတ်သလို အသုံးပြုတက်ဖို့သာ ဖြစ်သည်။ အသုံးချခြင်း အသုံးပြုခံ သူကို အနိုင်ယူချင်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အာဏာရှိလျှင်လည်း အာဏာကို အပြည့် အသုံးချတက်သည်။ စီးပွားရှိလျှင် စီးပွားရေးမှာ မမှန်ကန်မှုများ ဖြစ်လာရသည်။ လူမှုရေးမှာလည်း အသုံးမတည်လို့ မိမိကိုယ်တိုင် အသုံးပြုခံရသည့် အဖြစ်သို့ ရောက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးချခြင်းကို မလုပ်ဆောင် အသုံးပြုသော ဆေးကောင်း တစ်ဖုံလို ဖြစ်စေချင်သည်။ ဆေးကောင်းတစ်ဖုံ ဖြစ်လာ ဖို့ရန်လည် ဖော်စပ်သူအပေါ် အဓိကပါဝင် ပတ်သက်သည့်အပြင် သမားကောင်းဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သည်။
ဤအတူ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် စွယ်စုံသမားတော်ကြီး လည်းဖြစ်၊ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်၊ သိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီးလည်းဖြစ်သည်၊ ထိုသို့ အတူမရှိသောဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံသော အတုလပိုင်ရှင်၏ ဟောဖော်ညွန်ပြ ဆိုဆုံးမသော တရားတော်တို့ကို နေရာလိုက် လိုက်နာကြသော သူတို့သည် စီးပွားရေး ပညာရှင်လည်း ဖြစ် နိုင်သည်၊ လူမှုရေးမှာလည်း အကျွမ်းဝင်သော အရာရှိကြီးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ ပညာရေးတွင်လည်း ပညာ ရှင်ကြီးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်အပြင် ကျွမ်းကျင်ရာနေရာလိုက် ပညာရှင်တွေ ဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ပညာရှင်တွေ ဖြစ်နိုင်ဖို့ရန် မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောဖော်ညွန်ပြ ဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့သော ပိဋကတ်သုံးပုံတို့ကို မှတ်သား လိုက်နာကြလျှင် မိမိတို့ ရည်မှန်းသော အနာဂါတ်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ကြမည်ဆိုတာ လက်ဖပါး မြေခတ်လို မလွဲသလိုပင် ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့လည်း ဖြစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဟုလည်း ဆုတောင်းပတ္တနာ ဆန္ဒပြု လိုက်ပါသည်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 1:45 PM